गर्भवती बिरालो मार्ने ट्याक्सी चालकलाई २ वर्षकाे जेल सजाय ! « News24 : Premium News Channel
क्वालालमपुर । बिरालाे मार्नेलाई जेल सजाय ! सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर मलेसियामा यस्तै भएकाे छ । एकजना ट्याक्सी चालकलाई अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय फैसला गरेको छ ।
समाचार एजेन्सीहरुले जनाएअनुसार गर्भवती भएको बिरालोलाई मारेको अभियोगमा मलेसियाकाे अदालतले बिहीबार ती चालकलाई जेल सजायको फैसला गरेको हाे । जनावर अधिकारवादी कानुन व्यवसायी ए. मोहनराजले अनावश्यक रुपमा चालकले बिरालोलाई मारेको अभियोग लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए ।
एक जना महिलाले मारिएको त्यो विरालोको शव प्रहरी कार्यालयमा लगेर उजुरी दिएकी थिइन् । साे उजुरीपछि दाेषी ठहर गरिएको ४२ वर्षीय मोहनराजले आफूले जानीजानी बिरालोको हत्या नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनको आग्रह र दावीलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले बिहीबार दुई बर्षे जेल सजाय सुनाएको हाे।
मलेसियामा यसरी जनावर हत्याकाे आरोप लागेका अभियुक्तहरुलाई बढीमा तीन वर्ष जेल सजाय गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर न्यायधीशहरूले ती चालकलाई दुई वर्ष मात्र सजाय तोकेका हुन् ।